Sidee hay'adaha ajnabiga ah ee Xalane ku helaan xogta qaraxyada Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Sidee hay’adaha ajnabiga ah ee Xalane ku helaan xogta qaraxyada Muqdisho?
Muqdisho (Caaimada Online) – Baaritaan ay sameysay Caasimada Online ayey ku ogaatay in hay’adaha shisheeye ee dagan Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho helaan inta ugu badan xogta qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ka hor inta aysan dhicin.
Caasimada Online oo la hadashay Soomaali iyo ajaaniib dagan Xalane, islamarkaana qeyb ka ah hay’adaha shisheeye ee dhanka amaanka ayaa ogaatay in lacag badan oo kumanaan kun oo dollar ah ay ku bixiyaan helista xogta qaraxyada.
“Ma heli karno mana heysano qalab lagu ogaan karo qaraxa, nuuca gaariga, balse waxan lacag ku bixinaa inaa ogaano qaraxa iyo marka uu soo galo ama ku soo wajahan yahay Muqdisho,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay qofka la hadlay Caasimada Online.